> Resource> Utility> Olee dezie wdg Files
Gịnị bụ wdg faịlụ?
Wdg-anọchi anya "Dynamic Link Library". Ezie na e nwere dị iche iche nkọwa nyere si Microsoft, onye a pụrụ ịbụ mma otu:
"A Dynamic Link Library (wdg) bụ otu faịlụ nke koodu nwere ọrụ na ike ga-akpọ ndị ọzọ executable koodu (ma ihe ngwa ma ọ bụ ọzọ wdg). Programmers eji DLLs inye koodu na ha nwere ike iwerekwa na ngwugwu si iche ọrụ. N'adịghị ka ihe executable (exe) faịlụ, a wdg-apụghị ozugbo na-agba ọsọ. DLLs ga-akpọ ndị ọzọ na koodu na a na-ama ekpede. "
Mgbe mkpa dezie wdg faịlụ?
Dezie wdg faịlụ bụ n'ezie adịghị mfe ka ị na-eche. Ha na-dere n'ọtụtụ asụsụ, dị ka C, C ++, C #, Delphi, Anya Basic, Anya Basic.Net, na otú pụta. Ya mere, ị na-achọrọ a bit nke kọmputa nkà mgbe edezi ya.
• Ị na-agbali mbanye anataghị ikike ya na-eme ihe ndị ọzọ na ihe ọ na e bu n'obi ime.
• Ị chọrọ wepụ Oyiyi si DLLs.
• Ị chọrọ weghachie njinịa ihe ngwa .
• Ị bụ a geek na chọrọ ịhụ ihe ya anya ka n'ime.
bụrụ na ị nwere ihe mere dị ka n'elu, i nwere ike ịgbalị dezie wdg faịlụ, ma ọ bụ ị na-agaghị kwesŽrŽ ime otú ahụ. Na ị ga-mma ịjụ technicians maka enyemaka ma ọ bụ jiri ọkachamara na mfe wdg faịlụ nchịkọta akụkọ, ma ọ bụrụ na ị bụ onye na kọmputa newbie.
Olee otú dezie wdg faịlụ?
E nwere ụzọ dị iche iche dezie wdg faịlụ. Ị nwere ike ibudata a wdg nchịkọta akụkọ freeware, ma ọ bụ na-a wdg akụ nchịkọta akụkọ, lee, m ike ikwu na ị dezie wdg faịlụ na a omume aha ya bụ "Resource Hacker", nke bụ kpamkpam free na pụrụ ịtụkwasị obi wdg editting ngwá ọrụ. Ị nwere ike mfe ibudata a omume na Ịntanetị.
Ẹkedori Anya Studio na-aga Njikwa> Open. Gaa .dll ma ọ bụ .exe faịlụ ị na-agbalị na-emeghe, na n'ihu na ịpị Open.
Ugbu a ị ga-na a na ihuenyo na nwere niile nke dị ego gị. Ị nwere ike idezi wdg faịlụ na window na mgbe ahụ-azọpụta ya.
Cheta na: Ozugbo wdg faịlụ a editted na ị na-ekpebi naghachi mbụ faịlụ na ọhụrụ otu, ha nwere ike inwe ụfọdụ njehie mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume na e dere nke a wdg faịlụ. Anyị ukwuu atụ aro ka ị ịzọpụta wdg faịlụ dị ka a ọhụrụ na echiche nke ọma tupu editting wdg faịlụ.
Ụzọ dị mfe iji idozi wdg njehie kama edezi ya
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ idozi njehie nke mere na gị wdg faịlụ, e nwere ihe mfe ụzọ karịa dezie wdg faịlụ - n'iji kọmputa mmezi ngwá ọrụ ike iṅomi ma idozi njehie. Wondershare 1-Click PC Care Bụ na ụdị ngwá ọrụ. Ị na mkpa ibudata na ịwụnye ya na kọmputa gị, mgbe ahụ, ọ ga-elele niile njehie gụnyere wdg njehie. Niile ị chọrọ ime bụ ịrụ a click nke "Idozi". Iji zere adabaghị wdg edezi, nke a bụ ụzọ kasị mma nwere a-agbalị.
Olee otú Detuo & mmepụta oyiri nkebi nkebi / Draịvụ